Yurub oo hadda noqotay xarun xudun u ah Fayruska Corona. – Geelle Magazine
Yurub oo hadda noqotay xarun xudun u ah Fayruska Corona.
caliahmed Posted On March 14, 2020
Hay’adda Caafimaadka Aduunka ee WHO ayaa shaaca ka qaaday in Yurub hadda ay noqotay meel “xudunta u ah” cudurka aduunka dhan jahwareerka ku riday ee coronavirus.
Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus wuxuu ku booriyay waddammada caalamka in ay isticmaalaan tallaabooyin dagaal, abaabul bulsho si looga badbaada caabuqa Corona.
“Ha u oggolaan oo keliya inuu dabkan gubto,” ayuu yidhi Dr Tedros.
Hadaladan Dr Tedros ayaa yimid xilli dhowr waddan oo Yurub ka tirsan laga soo sheegayo in sare u kac ku yimid cudurrada iyo dhimashada. Dalka Talyaaniga ayaa diiwaan geliyay lacagtii ugu badneyd maalin kasta ee looga hortagayo caabuqan.
Waxaa jiray 250 dhimasho ah oo la diiwaan-geliyay 24-kii saac ee la soo dhaafay, taasoo tirada guud ahaan ay noqotay 1,266, iyadoo guud ahaanna tiradii hore ay ahayd 17,660 cudurro ah.
Dalka Spain, oo ah dalka ugu dhibaatada badan dalalka Yurub kadib dalka Talyaaniga, ayaa soo weriyay in 50% ay noqdeen dadkii uu ku dhacay cudurqan Jimcihii. Caabuqyada ayaa kordhay oo gaaraya 4,231.
Raiisel Wasaare Pedro Sanchez ayaa sheegay in xaalad feejignaan leh ay ka dhaqan gali doonaan halkaas wixii ka dambeeya Sabtida maanta ah.
Xakamaynta ayaa sidoo kale lagu soo rogay tiro ka mid ah xuduudaha dalalka Yurub, iyada oo si dhakhso leh looga jawaabayo inuusan faafin fayraskan.
In ka badan 132,500 oo qof ayaa laga helay cudurka ‘Covid-19’ ee 123 waddan oo adduunka ah, sida ay sheegtay hey’adda WHO.
Wadarta tirada dhimashada ayaa gaartay 5,000, waana tiro uu Dr Tedros ku tilmaamay in ay dhacdadan “ dhacdo naxdin leh”.
“Yurub waxay hada noqotay xudunta dhexe ee caabuqa Corona, iyada oo kiisaska lasoo sheegay iyo dhimashada ay ka badan tahay dunida inteeda kale marka la isku daro, marka laga reebo Shiinaha”, ayuu yidhi Dr Tedros.
“Tiro intaas ka badan ayaa hadda lasoo wariyaa maalin walba marka loo eego intii laga soo sheegay Shiinaha heerka ugu sarreeya ee cudurkan.” Ayuu sidoo kale hadalkiisa ku daray Dr Tedros.
Sidoo kale kororka ku yimid dalalka Spain iyo Talyaaniga kadib, dalka Faransa ayaa hadda xaqiijiyay 2,876 xaaladood iyo 79 dhimasho, oo kasoo baxday guud ahaan 61 geerida Maalintii Khamiisti aheyd.
Jarmalka waxaa la arkay 3,062 xaaladood iyo shan dhimasho ah. Waxaa sidoo kale dalka Ingiriiska laga helay 798 cudur iyo 11 dhimasho ah.
Isagoo ku dhawaaqay gobolka feejignaan ee Spain, Mr Sanchez wuxuu sheegay in dowladdu ay “abaabuli doonto dhammaan ilaha gobolka si si wanaagsan loogu ilaaliyo caafimaadka dhammaan muwaadiniinteeda”.
Waxay awood u yeelan doontaa in ay xadiddo dhaqdhaqaaqa, dalbato daad-gureynta, waxay mamnuuceysaa marinadeeda meelaha qaar iyo faragelinta warshadaha illaa 15 maalmood.
“Guushu waxay ku xirantahay qof kasta oo inaga mid ah,” ayuu yiri Mr Sanchez.
“Geesinimadu sidoo kale waxay ku saabsan tahay inaad gacmahaaga maydho iyo joogitaanka gurigaaga.” Ayuu sidoo kale yiri.
Waa in laga fogaadaa dhammaan “safarka lama huraanka ah” ee qaybo ka mid ah dallka Spain.
Talyaanigu wuxuu dalka oo dhami kusoo soo rogay xayiraad dhan walba ah.
Dhanka kale, ugu yaraan 10 dal oo kale oo ku yaal Yurub ayaa fulinaya xiritaanka xadkooda, waxaana ka mid ah dalalkaasi:
Danmark: Waxay xireysaa xuduudaha martida ajnabiga ah Maanta oo Sabti ah.
Czech Republic: Waxay mamnuucaysaa dhamaan ajaanibta in ay soo galaan wadankeeda, marka laga reebo kuwa haysta ogolaanshaha daganaashaha. Sidoo kale waxay Mamnuucaysaa inta badan muwaadiniinteeda u gaarka ah in ay ka baxaan dalka.
Slovakia: Waxay xiraysaa xuduudaha dhammaan ajaanibta ay kasoo galaan, marka laga reebo kuwa haysta sharciga daganaanshaha.
Austria: Waxay xireysaa seddex xuduudood oo xuduudeeda dhulka ah oo Talyaanigu la leeyahay shisheeyaha oo dhan, marka laga reebo kuwa haysta caddeyn caafimaad oo lasoo saaray afar maalmood gudahood. Xayiraad looma hayo muwaadiniinta Australiyaanka ah.
Yukreen: Waxay xireysaa xadka ay la wadaagaan ajaaniibta (marka laga reebo dibloomaasiyiinta) muddo labo toddobaad ah.
Hangari: Waxay xireysaa xuduudaha ay la wadaagaan Austria iyo Slovenia.
Poland: Laga bilaabo maalinta Axadda ah waxay xiri doontaa xuduudaha dadkeeda oo dhan.
Beljamka, Faransiiska, Switzerland iyo qaybo ka mid ah Jarmalka ayaa ka mid ah waddamadii ugu dambeeyay ee xidha iskuullada.
Waxaa kale oo jira xannibaado ballaaran oo ku saabsan isu imaatinnada ballaaran iyo tallaabooyin lagu xiro tiyaatarrada, makhaayadaha iyo baararka.
Horyaalka Jarmalka ee Bundesliga, oo ah midka kaliya ee shanta horyaal ee ugu waa weyn Yurub ee weli loo ciyaaro, ayaa ah in la hakiyo kulamada labada koox ee ugu sareeya laga bilaabo Maalinta Talaadada ah.
Magaalada Paris ee Louvre – matxafka farshaxanka ugu weyn adduunka ayaa ku dhawaaqay in la xirayo laga bilaabo Maalintii shalay ee Jimcaha, sidoo kale Eiffel Tower.
Tirada kiisaska cudurka ‘coronavirus’ ee maalin kasta laga soo sheego Yurub wuxuu kor u dhaafay u dhaafay Shiinaha heerkii ugu sarreeyay.
Laakiin Yurub waxay ku jirtaa meel ka xun meeshii Shiinaha uu gaaray.
Inta badan kiisaska Shiinaha waxay ahaayeen hal meel, gobolka Wuhan oo kaliya, kuwaasna waxay badankood ku urursanaayeen hal magaalo, Wuhan.
Shiinaha Waxaa la macaamilay dowlad awood leh oo soo rogtay karantiilnimada ugu weyn taariikhda aadanaha.
In kasta oo ay jiraan meelo ka mid ah Yurub dhexdeeda, tani waa mid ka dillaacay qaarad oo dalal kala duwan ayaa qaadanaya xeelado aad u kala duwan oo lagula tacaalayo cudurka ‘coronavirus’.
Dhamaan tirooyinkaani waxay ku saleysan yihiin kiisas la ogaaday, laakiin saynisyahano ayaa ka baqaya in ay jiri karaan faafitaano balaaran oo ka socda wadamada aan laheyn aaladda lagu arki karo cudurkan.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah oo heer qaran ah, oo u oggolaaneysa dowladda federaalka in ay ku hesho lacag gaareysa $ 50bn ($ 40bn) oo maaliyad ah.
Goor dambe oo Jimcihii ah, Madaxweyne Trump wuxuu sheegay inuusan u baahnayn inuu gooni goobi, inkasta oo uu la kulmay ugu yaraan hal qof oo qaba cudurka ‘coronavirus’.
Xayiraadda safarkiisa 26 dal oo Yurub ah, oo uu la kulmay xanaaq iyo jahwareer toddobaadkan, ayaa la dhaqan geliyay saqdii dhexe ee habeenka EDT (0400 GMT).
Pakistan waxay xireysaa dhamaan xuduudaha dhulkeeda, waxayna xaddideysaa duulimaadyada caalamiga ah muddo 15 maalmood ah, wasiirka arrimaha dibedda dalkaasi ayaa yiri.
Kanada gudaheeda, xildhibaano ayaa u codeeyay in la joojiyo baarlamaanka, waxaana saraakiisha caafimaadka ay ku taliyeen in laga hortago safarka aan daruuriga aheyn ee dibada.
Raiisel Wasaare Justin Trudeau ayaa bilaabay 14 maalmood oo gooni gooni ah Jimcihii kadib marki ay xaaskiisa martay tijaabo caafimaad oo niyad wanaagsan ahi.
Sidoo kale Jimcihii, Wasiirka Arimaha Gudaha ee dalka Australia Peter Dutton ayaa la dhigay Cusbitaal kadib markii laga helay cudurkan. Dhawaan ayuu u safray Washington, wuxuuna la kulmay Madaxweyne Trump gabadhiisa, Ivanka.
Dhanka kale, Iran ayaa shaacisay dhimashada 85 kale, waana tirada ugu badan ee dalka lagu sameeyo muddo 24-saac gudaheed, taasoo tirada dhimashada halkaa ka dhigeysa 514. Tirada dhabta ah ayaa laga cabsi qabaa in ay aad uga badan karto.
Kiisaska ugu horreeyay ayaa waxaa laga diiwaan geliyay Bariga Afrika dalalka Kenya, Itoobiya iyo Suudaan, kuwaas oo lahaa kii ugu horreeyay ee gobolka ku dhinta.
Duulimaadyada Jet2 ee Spain ayaa la joojiyey cabsi laga qabo caabuqa Corona.